Xog: Waare iyo odayaasha degmada Buula-burde oo 2 qodob isku fahmi waayay | Caasimada Online
Home Warar Xog: Waare iyo odayaasha degmada Buula-burde oo 2 qodob isku fahmi waayay
Xog: Waare iyo odayaasha degmada Buula-burde oo 2 qodob isku fahmi waayay
Buulo-burde (Caasimada Online) – Waxaa xalay natiijo la’aan ku soo dhamaaday kulan saacado badan qaatay oo ka socday degmada Buula-burde ee Gobalka Hiiraan, kaas oo u dhaxeeyay odayaasha degaanka iyo Madaxweynaha HirShabelle Maxmaed Cabdi Waare.
Caasimada Online ayaa ogaatay kulanka lagu kala tagay islamarkaana dhinacyada isku fahmi waayeen laba qodob oo ay kala wataan, halka mid kamid ah beelaha degmadaasna ay diiday ka qayb galka kulanka.
Odayaasha iyo Waare ayaa isku fahmay in la dhiso Golaha degaanka ee degmada laakiin Waare waxa uu doonayaa in uu shaqeeyo Guddoomiyaha degmada ee dhawaan la soo magacaabay kadibna dhismaha Golaha degaanka la bilaabo, halka odayaasha ay doonayaan in uusan shaqa gelin Guddoomiyaha cusub ee uu ku yimaado doorasho Golaha degaanka ah, lana soo hormariyo dhismahooda, sidoo kale waxay ku taliyeen in maamulkii hore sii shaqeeyo.
Sidoo kale odayaasha qaar ayaa diiday ka qaybgalka kulanka Madaxweyne Waare, waxayna ku cabanayaan in madaxweynaha uu ku dhaqmayo cadaalad darro iyo wax duudsiin.
Maxamed Cabdi Waare, ayaa axaddii gaaray Buula-burde si loo xaliyo khilaaf degmada ka jira kaas oo u muuqda in ay xaaladda ka sii dareyso.